Ụbụrụ Brain: Neurochemicals, cheta na mbụ kiss | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Ụdị Ihe Mgbochi Neurochemicals
Cheta mkpuru obi mbu nke nwere obi uto?
N'ebe ọ bụla ị hụrụ ịhụnanya mbụ mere, ohere ị na-echeta bụ ihe niile banyere ya ... ebe, ísìsì, uto, ihe ị na-eyi, mmetụta nke egbugbere ọnụ na-agwakọta, egwu egwu na mmetụta nke mmekọrịta chiri anya na olileanya maka ọdịnihu. O nwere ike ime mgbe ị dị afọ iri na ụma. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịmalite ịlụ onye mbụ, ma ị maara na ọ bụ ụbụrụ na-ahụ maka ụbụrụ na ụbụrụ gị nke nyere ahụmahụ ahụ?
Ọ gaghị ewepụ ihe omimi nke ịhụnanya ịmara nke a, ma ọ ga-enyere anyị aka ịghọta ihe mere ụfọdụ mmetụta na ahụmahụ ji dị ike ma na-eme ihe ncheta dị otú ahụ na-adịgide adịgide.
Ya mere, gịnị mere n'oge ahụ? Mgbe anyị ghọtara ihe dị anyị n'obi, obi anyị na-eti obere ngwa ngwa ma anyị nwere ike 'ghee' ma ọ bụ malite ịba. Nke ahụ bụ isi ala anyị na-agba ọsọ adrenaline. Olileanya nke obi ụtọ na ụgwọ ọrụ nke mere ka anyị soro onye ọhụụ na-emekọ ihe, na-emetụta ya site na teh go-get-it neurochemical do dopamine. (Njikọ vidiyo a bụ nyochaa ndị ọkachamara bụ ndị chọpụtara akụkụ chọrọ na mmasị nke ọchịchọ nke dopamine.) Dopamine na-enyere aka icheta ihe mmetụta uche, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị anọgide na-eche ma ọ bụ na-ekwu maka ya. Ndị na-eto eto na-emepụta dopamine karịa ndị okenye ma ọ bụ ụmụaka ma bụrụ ndị na-echebara ya echiche.
Ụda obi ụtọ nke nsusu ọnụ ma nabatara onwe ya ga-esi na iju mmiri ahụ opioids na nkwụghachi ụgwọ nke ga-esi na ya pụta mgbe dopamine gasịrị. Ọzọ, dịka na dopamine, ndị na-eto eto na-emepụta ihe karịa opioids karịa ndị okenye ma ọ bụ ụmụaka.
Mmetụta nke mmekọrịta enyi
Mmetụta nke njikọta na ntụkwasị obi nke na-abịa mgbe anyị na-eme ka onye ọ bụla nọrọ nso ma ọ bụ bụrụ onye sitere na oxytocin. Ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ na afọ ojuju n'echiche nke ịchọta onye nwere ike ịnwe ya, ọ ga-abụ na o nwere ike ibute ya site n'ọtụtụ dị elu serotonin na ụbụrụ. Ọ na-arụ ọrụ mgbe anyị nwere afọ ojuju ma ọ bụ ọnọdụ nke ndị isi obodo, dịka ịchọta onye ị hụrụ n'anya, ohere ịghọ di na nwunye. Ọ bụla isi ọwụwa ma ọ bụ ihe mgbu ga-apụ n'anya endorphins gbagharia iji chekwaa ihe mgbu.
Ị ga-echeta nke a nke ọma n'ihi na, na ụbụrụ oge ochie gị, ọ bụ ihe gbanwere ndụ. Ọ ga-emepụta ụzọ mgbapụta siri ike na ụbụrụ gị, na-echetara gị mmetụta obi ụtọ ma na-agba gị ume ikwughachi àgwà ahụ ugboro ugboro.
Ọ bụrụ na obi gị laghachiri azụ ma chọọ ka gị na ya bọọ, obi gị ga-awụda ihe ọ bụla ọzọ na mkparịta ụka nke obi ụtọ na-enwe obi ụtọ na atụmanya nke obi ụtọ na echiche gị maka ọdịnihu obi ụtọ na-aga n'ihu.
Ọ bụrụ na, ọ chọghị na ị ga-enwe nsogbu ọzọ, ị ga-abụrịrị na ị mepụtara cortisol, ihe na-akpata nchekasị na-emetụta ịda mbà n'obi. Iche echiche nke na-adịghị na-akwụsị na ụzọ ndị mmadụ banyere onye ahụ ma ọ bụ ọnọdụ, ihe ị / ha mere maọbụ na ha emeghị, nwere ike ịpụta site na mmetụta nke ala dị ala nke serotonin. A na-ahụ nke a n'ọgba aghara dị egwu. Iwe na iwe nke ihe mgbaru ọsọ anyị ma ọ bụ ọchịchọ nwere ike iduga nsogbu ahụike uche ma ọ bụrụ na anyị amụtaghị iche iche maka ọnọdụ ahụ.
Nnukwu dopamine na ezughị ezu na serotonin, ndị na-ahụ maka ụbụrụ nke "obi ụtọ" na "obi ụtọ" n'ụzọ dị iche iche, na-emetụta obi anyị. Chetakwa, na obi ụtọ na obi ụtọ abụghị otu ihe ahụ. Dopamine bụ "ụgwọ ọrụ" neurotransmitter nke na-agwa obi anyị: "Nke a dị mma, achọrọ m ka ndị ọzọ." Ma ọtụtụ nrịbama dopamine na-eduga na ahụ riri ahụ. Serotonin bụ "afọ ojuju" neurotransmitter nke na-agwa anyị uche: "Nke a dị mma. Enwere m. Achọghị m ma ọ bụ mkpa m ọzọ. "Ma ntakịrị serotonin na-eduga ná ịda mbà n'obi. Dị ka o kwesịrị, ha abụọ kwesịrị ịbụ ezigbo ọkọnọ. Dopamine na-amanye serotonin. Nsogbu na-adịghị ala ala na-akụda ma.
Ịmụta inwe afọ ojuju ma ọ bụghị ịchọrọ ịchọta mgbe niile na-akpali akpali bụ ihe ọmụmụ ndụ dị mkpa iji mụta ihe. Ya mere, a na-amụta ịchịkwa echiche, echiche efu na mmetụta uche anyị.
Otu akwụkwọ nke Loretta Breuning kpọrọ "Ụdị Obi Ụtọ nke Obi Ụtọ Obi Ụtọ"Na ya website nye akwukwo obi uto maka obi uto anyi na enweghi obi uto.
<< Ọkpụkpụ Systemgwọ Ọrụ System >>